နေ့စဉ်ပျော်ရွှင်စေရေး အကြံပြုချက်များ – Trend.com.mm
Posted on February 4, 2016 January 18, 2019 by Admin
ဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကို ဖန်တီးယူလို့ရပါတယ်။ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်တာလည်း ဒီစိတ်ပဲ ပြီးတော့ မပျော်ရွှင် အောင်လုပ်တာလည်း ဒီစိတ်ပါပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့ အခြေအနေ အမျိုးမျိုးကို နေ့စဉ်တွေ့ကြုံခံစားနေရပါတယ်။ တချို့အခြေအနေတွေကတော့ ပျော်ရွှင်မှုတွေ ဖြစ်မလာဘူးပေါ့။ ဘယ်လိုပင်ပြောဆိုကြပါစေ စိတ်မချမ်းမြေ့စရာတွေကို အမြဲတွေးနိုင်သလို အဲဒါတွေကို စဉ်းစားနေမဲ့ အစား ပျော်ရွှင်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးကိုပဲ တွေးတော့မယ်ဆိုပြီး ကျုပ်တို့ရွေးယူနိုင်ပါတယ်။
ကျုပ်တို့အားလုံး လောကဓံအခြေအနေ အမျိုးမျိုးကို တွေ့ကြုံခံစားကြရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလောကဓံတွေက ကျုပ်တို့အတွေး၊ သဘောထားတွေကို လွမ်းမိုးခြယ်လှယ်ခွင့် မပေးသင့်ပါဘူး။ ဒီလိုလောကဓံတွေကို လွမ်းမိုးခြယ်လှယ်ခွင့်ပေးလိုက်မယ် ဆိုရင် ကျုပ်တို့ဟာ အရှုံးသမားဖြစ်သွားမယ်။ ကျုပ်တို့ရဲ့ လွတ်လပ်မှုတွေ ဆုံးရှုံးသွားမယ်။ ကျုပ်တို့ရဲ့ပျော်ရွင်မှုတွေကို အပြင်ကလွမ်းမိုးမှုတွေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ရာကျသွားမယ်။ တဖက်က အပြင်က ရိုက်ခတ်မှုတွေ ကင်းကွာအောင်နေထိုင်ပြီး ကျုပ်တို့ဘဝပျော်ရွှင်အောင် ကျုပ်တို့လိုသလို ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ စိတ်ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်မှုဆို တာဘာလဲ။ စိတ်ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ အတွင်းစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုပါပဲ။ စိတ်ပူလောင်မှုတွေ၊ ကြောက်ရွံ့မှုတွေ၊ စွဲလမ်းနှစ်သိမ့်မှုတွေမရှိမှ သာ စိတ်ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်မှုကို ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျုပ်တို့နှစ်သက်မြတ်နိုးတဲ့အရာတွေ၊ ရရှိတဲ့အရာတွေ၊ ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေ၊ ကျုပ်တို့ တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေလုပ်ရတဲ့အခါ စိတ်ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ အပြင်လောကဓံရိုက်ခတ်မှုကို ခွင့်ပြုထား တာကြောင့် လူတွေအတော်များများအတွက်တော့ ပျော်ရွှင်မှုဟာ တခဏသာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်မှုကို ရရှိခံစားဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းတစ်ခုကတော့ နေ့စဉ်တရားထိုင်ခြင်းပြဲဖစ်ပါတယ်။ စိတ်ငြိမ်းချမ်းလာတာနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုအလေ့အထကို ရရှိခံစားရ ပါတယ်။ နေ့စဉ်ပျော်ရွှင်ရေးအတွက် အကြံပြုချက်များမှာ –
၁. သင်ရဲ့ရှေးရိုးစွဲအမြင်ကို အားထုတ်ပြီးပြောင်းလဲပါ။ အကောင်းဖက်က ကြည့်ပါ။ စိတ်က မကောင်းတဲ့ဖက်ကကြည့်ဖို့ ဆွဲဆောင်ကောင်း ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ခွင့်မပြုလိုက်ပါနဲ့။ အပြုသဘောဖက်က ကြည့်တတ်အောင်ကြိုးစားပါ။
၂. အခက်အခဲတွေကိုမစဉ်းစားဘဲ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုဘဲ ထည့်တွက်စဉ်းစားပါ။
၃. စိတ်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာတေးသံသာများကို နားထောင်ပါ။
၄. သင့်ကို ရယ်မောစေတဲ့ ရယ်မောစရာဟာသ၊ ပျက်လုံးတွေကိုကြည့်ပါ။
၅. နေ့စဉ်နေ့တိုင်း စိတ်ဓါတ်အားတက်စရာ စာအုပ် ဒါမှမဟုတ် ဆောင်းပါးတစ်မျက်နှာ နှစ်မျက်နှာ ဖတ်ပါ။
၆. ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကို သုံးသပ်ကြည့်ပါ။ စိတ်ဓါတ်ကျစရာအတွေးတွေ ဝင်လာတာနှင့် ကျေနပ်စရာအကြောင်းလေးတွေကို တွေးကြည့်ပါ။
၇. ပြီးမြောက်ခဲတဲ့အရာတွေကိုဘဲ သတိပြုစောင့်ကြည့်ပါ။ မပြီးမြောက်ခဲ့တဲ့အရာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ဘာကြောင့်ဆိုတော့ လုပ်စရာတွေအများကြီးချပြီး ကိုယ်မစွမ်းနိုင်လို့မပြီးခဲ့ရင် စိတ်မချမ်းမြေ့စရာ၊ ဒေါသ ထွက်စရာတွေ ဖြစ်တတ်လို့ပါ။
၈. နေ့တိုင်း ကိုယ့်အတွက် အကျိုးဖြစ်စေတဲ့ အရာတွေ လုပ်ပါ။ ဥပမာ- စာအုပ်တွေ ဝယ်ခြင်း၊ ကမ်းခြေထွက် လမ်းလျှောက်ခြင်းတို့ပေါ့)
၉. နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အခြားသူတွေပျော်ရွှင်စေမဲ့ အရာတစ်ခုခု ဖန်တီးပါ။ အကြင်နာစကား၊ ဘော်ဒါတွေကို ဝိုင်းကူပေးခြင်း၊ အခြားသူတွေလမ်းကူးနိုင်ရန် ကားရပ်ပေးခြင်း၊ ဘတ်စ်ကားမှာ တခြားတစ်ယောက်ကို နေရာဖယ်ပေးခြင်း၊ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတယောက်ကို လက်ဆောင်ပေးခြင်း စသဖြင့်လေ။
၁၀. စိတ်ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်မှုကို အမြဲရှေ့ရှုမျှော်မှန်းပါ။
၁၁. ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့သူတွေကို သွားပြီးမနာလိုမဖြစ်ပါနဲ့။ သူတို့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုအတွက် ပီတိဖြစ်ပါ။
၁၂. ပျော်ရွှင်ကြည်နူးတတ်တဲ့ လူတွေနှင့် ပေါင်းသင်းပါ။ သူတို့တွေဆီက စိတ်ပျော်ရွှင်မှုနည်းလမ်းတွေကို သင်ယူပါ။ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုဆိုတာ ကူးစက်ရောတစ်မျိုးဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
၁၃. ကိုယ့်ဆန္ဒအတိုင်း၊ ကိုယ်ကြံရွယ်ထားတဲ့အတိုင်း ဖြစ်မလာတဲ့အခါ စွဲလန်းမှုတွေ၊ တတ်မက်မှုတွေ မရှိဘဲ နေထိုင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ။ တတ်မက်စွဲလမ်းမှုတွေကင်းမဲ့ခြင်းက စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားတဲ့နေရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေတယ်။ စိတ်စွဲလမ်းမှုကင်းမဲ့ခြင်းဟာ အတွင်းစိတ်ငြိမ်းချမ်းနဲ့ ဆက်နွယ်နေပြီး အတွင်းစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုမှ စိတ်ချမ်းမြေ့ခြင်း ဖြစ်စေပါတယ်။
၁၄. ခဏမဏ ပြုံးပျော်ရယ်မောပါ။